Ukufakwa kokumqoka kuphela namuhla kungaba wusizo hhayi kuphela ochwepheshe, kodwa futhi master endlini. Ukuvakashela esitolo, akufanele kuphela uholwe izindleko imishini - kutuswa ukubheka ukusebenza, okuyinto has a hlobo locingo. Ngemva kokubukeza ezibekiweko lobuchwepheshe, ungakwazi ukwenza ukukhetha okufanele.
Ngaphambi lonke izici okudingeka ukuba banake isigaba zedivayisi. Lingase libhekisele imishini yasekhaya noma professional. Uma uhlela ukusebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela ngezikhathi ezithile, kufanele uthanda uhlobo lokuqala, kuyilapho ochwepheshe kuyinto ongantuli ukuthi ingaqalisa amahora ambalwa ngosuku ngaphandle kokuphumula.
Kubalulekile ukuba acabangele kakhudlwana futhi ingumkhiqizi uyabanikeza emakethe nge hlobo locingo. Izinkampani eziningi okuye kwenziwa kuye kwabonisa ngokwabo emakethe imikhiqizo efanele; phambi kwabanye kufanele sinake kubo. Ngokwesibonelo, imodeli sasivumela ethandwa kuyinto okufana ukufakwa kokumqoka kuphela imishini "Interskol 14,4ER YEBO", okuzoxoxwa ngezansi.
Incazelo ukufakwa kokumqoka kuphela uphawu "YEBO-14,4ER"
Lokhu sokuprakthiza ungenantambo izici ukufakwa kokumqoka kuphela kuwufanele ruble 5000. Kuyinto umshini ngoba imishini kanye kokuqina fasteners. Imishini ifakwe chuck keyless futhi has othomathikhi lokuphotha yokuvala, kwenza kubelula kakhulu ushintsho imishini. Ngemva kokucabangela kwabantu impahla ezenziwayo futhi banikezwe ubunjalo zokukhwabanisa, ungakhetha imodi imishini noma omunye izindlela eziningana torque.
"YEBO Interskol 4ER 14" iyithuluzi voltage kabani ibhethri 14.4 V Ungase uthande futhi umthamo webhethri, kuba 1.5 Ah. Uhlobo igobolondo - esheshayo. Torque obuyisilinganiselo 32 Nm.
Idivayisi ngezithukuthuku motor ibhulashi. Kuyo kukhona umsebenzi reverse, kodwa umthelela akuyona inketho. I ububanzi esiphezulu ngezikulufo esetshenziswa 5 mm. Kubalulekile ukuba banake ukuqina okwengeziwe ne torque, kuba 32 Nm.
Lapho abathengi ucabangela imodeli ukufakwa kokumqoka kuphela "Interskol YEBO 14 4ER", ngokuvamile banake ijubane uthi lokuphotha. It ziyahlukahluka kusuka 0 kuya 400 futhi kusukela linemibhikisho ngomzuzu-0 kuya ku-1400. Isethi iza amabhethri amabili. usayizi igobolondo esiphakathi 0.8 kuya ku-10 mm. Uma ukhetha lokhu imodeli, kufanele ucabangele ukuthi unesikhathi umsebenzi othini lokuphotha yokuvala.
Fixing Kwenziwa izilinganiso igobolondo okuyinto ayalingana 3/8. "Interskol YEBO 14 4ER" ukala 1.05 kg. Ukuthamba torque engu-17 ubudala Nm. Ungase futhi ube nentshisekelo isibalo amazinga torque, kuba elilingana 18 + 1. Ibhethri inqe ehoreni elilodwa, kubalulekile ukuba acabangele ekwabiweni isikhathi abela ukusebenza.
Isebenze imishini kwelinye ngesivinini ezimbili. I ububanzi we igobolondo 10 mm. Insimbi zokhuni imishini ungenza izimbobo, ububanzi esiphezulu okuyinto 10 futhi 22 mm, ngokulandelana. Ngaphambi uthenga ukufakwa kokumqoka kuphela ezinhle, abathengi ngokuvamile banake uhlobo ibhethri. Kulesi imodeli, Li-lon-ibhethri. Kwaba wakhe uhlobo ivame ukukhetha yomthengi.
Abathengi ikakhulukazi agcizelele ukuthi kuchazwe imodeli ungenantambo ukufakwa kokumqoka kuphela has a lot of izinzuzo, qiniseka ukuhlukanisa phakathi kwabo:
nokuba khona chuck keyless;
gearbox ezimbili isivinini;
izinyathelo 18 torque;
kufakwe 2 ibhethri;
Esakhelwe ngaphakathi izibani;
isethi ngesankahlu ephelele.
Ngokuphathelene chuck keyless, kuyokusiza opharetha ukushintsha snap pretty masinyane. Abathengi futhi uthanda yokuthi nge 18 amazinga torque engu bangasebenza workpieces ngezinto ezahlukene. Ukuze afakazele ukuthi - i-screwdriver ezinhle, kufanele kuphawulwe ukuthi unesikhathi gearbox zensimbi amagiya.
ukusebenza okuqhubekayo, ngokuvumelana umthengi bazonikezwa amabhethri amabili. amakhosi Domestic ukusho ukuthi lithium-ion self-ukuxoshwa kanye azinamphumela inkumbulo, yingakho avame ekhethwe abathengi.
Ukuba khona reverse zikuvumela ukuba asuse kancane sokuprakthiza, okuyinto washaya impahla ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ikakhulukazi uthanda amakhasimende amaningi nokukhanya esakhelwe ngaphakathi. Ukuze lula ezokuthutha kanye isitoreji ungenantambo sokuprakthiza nomkhiqizi ungeze ipotimende wakhe.
Izincomo ukusebenzisa ishaja nebhethri
Ishaja "Interskol 4ER YEBO 14" angathengwa at intengo ruble 1000. Ngaphambi ekuqaleni yethulwa kumele ixhunywe kwinethiwekhi nokufaka ibhethri. Amajaji kufanele zikhanyise ikhomba ukukhanya, okukhombisa ukuthi amandla ivuliwe.
Isinyathelo esilandelayo uchofoze inqubo inkinobho isiqalo. Kulokhu, LED elibomvu kukhanye izinhlansi, kuyilapho oluhlaza - uyaphuma. Uma inqubo ukushaja kuqedile, ebonisa oluhlaza ikhanyisa futhi. Ngemva kokuphothulwa ibhethri kumelwe asuswe isokhethi. Isikhathi icala bengase bazikhandlele 1.5 amahora, okuyinto kuncike umthamo webhethri.
Amazwana mayelana nezici isevisi
Injini ye-"YEBO Interskol 4ER 14" angathengwa ngentengo ruble 700. Nokho, uma ungafuni ukuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi ithuluzi, kubalulekile ukuba afeze yesondlo ngesikhathi esifanele. Ngaphambi ekuqaleni lo msebenzi, iziqinisekiso eenkhulwini indlu, ukujikeleza isiqondiso inkinobho kufanele isethelwe ku isikhundla maphakathi. Ukuze ukuphepha kanye nekhwalithi umsebenzi odingekayo ukugcina ithuluzi nokushaya komoya walo Slots ahlanzekile.
Uma imishini isetshenziswa isimo ewohlokayo, nekusebenta umsebenzi kuzoholela umonakalo injini. Uma uthola bafake ezinzima, esikhundleni ithuluzi. Ungenantambo screwdriver "Interskol 4ER YEBO 14", ngokusho kongoti, kumele kusetshenziswe ulandele iziyalezo ezikuyo. Ngemva kokuyifunda, uzokuqonda ukuthi enjinini kufanele aphathwe ngokucophelela okukhulu, ngaphandle amafutha noma amanzi e kwekhoyili.
Lapho beqeda umshini kufanele kuzohanjiswa nge indiza kakhulu emoyeni. I eshisayo kufanele kube evulekile. Kufanele kukhunjulwe ukuthi idivayisi esetshenziswa ne lwemidlalo intambo yamandla, kumele esikhundleni lokufeza ebhekele ukukhanda esitolo.
Izibuyekezo zezinkinga kungenzeka futhi izixazululo zabo
Kungakhathaliseki izinga wayengeyena imishini, kungase ukungasebenzi ngesikhatsi kokuhlinzwa. Uma umshini ingavuli, imbangela kungenzeka angenza ibhethri elula. Kwezinye izimo kuba inkinobho okuyiphutha noma ibhethri; ngezinye izikhathi ehluleka motor. Kulokhu, abathengi belulekwa ukuba uxhumane isikhungo service.
Uma uqaphela ukuthi umshini usemsebenzini waqala ukusakaza okhushuliwe umsindo reducer, ezingxenyeni le nhlangano zingahambi kahle noma ukugqoka. Gubha "Interskol YEBO 14 4ER" angagcina ukubhekana nenkinga uma ibhethri ayisaxhunyanisiwe ukuthola icala kunesidingo. Kulokhu sikhuluma ukunciphisa umthamo wayo. Ibhethri kufanele kuthathelwe indawo lapho iphutha. Nokho, ngezinye izikhathi ukwehluleka ukukhokha setha kubonisa ukwehluleka ishaja.
Abathengi belulekwa ukusebenzisa ukuze kulungiswe kuphela izingxenye zokuqala ezisele nezinye izinsimbi. Miselela eminye imininingwane unga kwayona, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma lapho sewaranti siphelelwe yisikhathi. Nokho, ngesikhathi impilo isidingo athobele nehhanisi sika. Babazi kahle, uzokuqonda ukuthi isitoreji ithuluzi sithinta isikhathi emsebenzini wayo.
Umshini kumele kube phakathi usebenzisa ikamelo evuthayo ezomile. isitoreji lokushisa Kunconywe zokhahlamba kusuka +5 ukuba +40 ° C. ithuluzi Ukusebenza ngaphambi kokuba isitoreji kumelwe kususwe bese usetha inkinobho kwindawo phakathi. Uma usebenzisa imishini okungenani kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha, ngemva kwalokho kudingeka ukushaja ibhethri.
"Izibuyekezo Interskol YEBO 14 4ER 'mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda ngenhla, kuyinto imishini zobuchwepheshe, kumele kusetshenziswe okuyinto, ligcinwe bese zithutha ngaphansi kwezimo ezithile. Ukuchayeka ngqo kwelanga, imvula, ukushaqeka ukushisa futhi ngesikhathi esifanayo akwamukeleki. I lokushisa kuma ngesikhathi yezokuthutha kufanele alingane umkhawulo ngenhla.
Massager sezinyawo nasemaqakaleni
Inhlanganisela - lokhu incazelo yegama elithi ...